Armand Noutack II ayaa waydiisatay Cabral Libi in uu raali galiyo raxmadda dhaqdhaqaaqa kow iyo toban milyan oo muwaadiniin ah - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Armand Noutack II ayaa waydiisatay Cabral Libi inuu raali galiyo ra'yiga dhaqdhaqaaqa ee kow iyo toban milyan oo muwaadiniin ah
Marxaladda Cabral Libi ee bandhigga Arena this Sunday 7 April 2019 ayaa sii wadaysa kordhinta shabakadaha bulshada. In daabacaadan ah ee shabakadaha bulshada on kooxaha Monday 8 April Armand Noutack II weydiiyo Cabral Libii inaan raaligelin u diro xubnaha dhaqdhaqaaqa kow iyo toban milyan oo muwaadiniin ah (WTO) kadib markii been ah oo ku saabsan natiijada codbixintan a ee Bafusamam.
Cabral Libi - Armand Noutack II - Editing, Lebledparle
Xaqiiqdii, hoggaamiyaha WTO ayaa su'aal laga keenay eedeymaha uu u sameeyay Isuduwaha Gobolka ee Galbeedka ee ku-meel-gaadhka ah oo ku saabsan caddaymaha ku saabsan lacagta la geeyey intii lagu jiray ololaha madaxtooyada. Jawaab, Cabral Libi wuxuu ku dhajiyay jawaabtiisa in Iskuduwihiisii ​​hore uu lahaa codadka 0 ee saldhigga codbixinta. Sida xaqiiqda jawaabta, Armand Noutack II wuxuu sheeganayaa in Iskuduwaha Qaranku uu been ka sheegayo caddaynta. Markaan daabacno daqiiqadaha, waxaan eegaynaa in musharaxa xisbiga UNIVERS uu yahay kaalinta saddexaad ee saldhigga cod bixinta Banengo E, codadka 15.
"Cabral Libii ma lahayn codadka 0 ee goobta cod-bixinta halkaasoo aan ku dhammeeyey waajibkaygii Citizen! Sidaa daraadeed, si loo ilaaliyo muuqaalkiisa, waxaan codsanayaa in uu ka hadlo hadaladiisa shalay iyo inuu raali galiyo dadweynaha xagjirnimada si uu uga baxo isaga oo jooga, isagoo sheeganaya in uu helay codka kalsoonida ee xafiiska aan ku codeeyay, wuxuu yareeyey wax aan caafimaad lahayn! », Qoraa Armand Noutack II, isaga oo intaa ku daray in" ujeedooyinka xaqiijinta, fadlan la xiriir ELECAM, xitaa heer qaran waxay leeyihiin tirooyinka xarun kasta oo doorasho! "
"Wax walba waan soo gudbiyay, waxaan ku dhahay waxkasta oo ku saabsan xadka yar ee macnaha yar ee aan ku heysto si aan u qaado musharaxnimadaydii qolka! Waxaan fursad u helayaa inaan u mahad celiyo dhammaan xafiiska gobolka iyo isuduwayaasha wasaarada oo aniga i raacay hawshaas geesinimo leh! Armand Noutack II wuxuu sii waday inuu u mahadceliyo dhamaan wadashaqeentiisa wakhtiga gobolka Galbeedka.
Armand Noutack II ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo hoggaamiyihiisa inta lagu jiro raadiyaha ama doodda TV-ga, sida laga soo xigtay Lebledparle.com maqaal hore.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1107295-cameroun-armand-noutack-ii-demande-a-cabral-libii-de-presenter-ses-excuses-aux-camarades-du-mouvement-onze-millions-de-citoyens